‘झ्यानाकुटी’ रिलिज पछि दंग निशा अधिकारी, किन त ? « Ramailo छ
‘झ्यानाकुटी’ रिलिज पछि दंग निशा अधिकारी, किन त ?
शुक्रबार देखि प्रदर्शनमा आएको फिल्म ’झ्यानाकुटी’ ले सुखद व्यापार गर्न सफल भएको छ । अझ दर्शकबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएपछी फिल्म युनिट दंग छ । आफ्नो फिल्मले दुई दिनमा एक करोडको व्यापार गरेको रिपार्ट निशाले मिडियालाई दिएकी छिन् ।
फिल्मको व्यापार र प्रतिक्रयाबाट विशेष गरी पहिलो पटक फिल्म निर्माणमा हात हालेकी निशा अधिकारी दंग छिन् । उनले फिल्ममा सहायक निर्देशनको जिम्मेवारी समेत सम्हालेकी छिन् । सिमोश सुनुवार निर्देशित फिल्ममा अभिनेता सौगात मल्ल र नायिका वेनिशा हमालको मुख्य भूमिका रहेको छ । सौगात र वेनिशासँग गरिएको रमाईलो कुराकानी हेर्नुस् :
शनिवार दर्शक प्रतिक्रिया बुझ्न निशा, सौगात, वेनिशा र निर्देशक सुनुवा फिल्म टिम राजधानीका गोपीकृष्ण, अस्टनारायण, जय नेपाल, लाबिम र सिभिल मल, बिग मुभिजमा पुगेका थिए । फिल्मको कथा, कमेडी अनि सौगात र वेनिशाको अभिनयलाई रुचाइएको छ । दर्शक प्रतिक्रिया हेर्नुस् :